Websaydhka Dhiirrigelinta Websaydhka ee Semalt
(arrinta ku saabsan hal olole oo ay sameeyeen khabiiro Semalt)
Ma ahan waqti dheer kahor, Shabakada Dunida kaliya waxay ahayd meel ku habboon oo xog laga helo. Laakiin wax walba way is beddeleen. Maanta, Shabakada ayaa noqotay aalad awood u leh kobcinta ganacsiga. Daabacaadda waraaqaha, idaacadaha, iyo xitaa telefishanka ayaa lumiyay saamaynkoodii hore. Waxaa jira dad iibsada wargeysyada. Wali waxaa jira dhagaystayaal idaacadaha. Lacagta waxaa lagu maal galiyaa telefishanada telefishanka, laakiin qof kastaa wuu fahmayaa in la gaadhay waqtigii xaqiiqada tooska ah. Halkaas ayaa dadku lacag ku sameystaan oo horumariyaan ganacsi guul leh.
Marxalad cusub ayaa horay u soo jirtay
Isbeddellada xag-jirka ee aragtida adduunka ayaa ka dhaca indhahayaga hortooda. Waxaa jira badmaaxiinno aad u tiro badan oo weheliya websaydhka adduunka. Teknolojiyadda casriga ah waxay ku korayaan xawaare isku mid ah. Waxaad ka gali kartaa shabakadda adiga oo adeegsanaya taleefankaaga casriga ah - fiirso fiidiyow, akhrinta wararka ama ... iibsan duub cusub. Bixinta badeecada khadka tooska ah way fududahay. Qof caadi ah ayaa hadda booqan kara dukaanka khadka tooska ah, oo ku wareegi kara buugga wax soo saarka, oo waydiin kara su'aalkooda. Qof kasta ayaa heli kara jawaab deg-deg ah maxaa yeelay jawaab-celintu waa shuruudo muhiim u ah adeegga macaamiisha tayada leh. Internetku wuxuu noqday suuq aad waxkasta ku iibsan karto, isla mar ahaantaana aalad suuq geyn xoog leh. Kororka dhaqaalaha ee dukaamada internetka ayaa xaqiijinaya faa'iidooyinka aaladaha websaydhka. Runtii way caawin karaan milkiilayaasha bogga si weyn u kordhiya dakhliga.
Xayeysiinta websaydhku runtii waxay u tahay dukaan kasto oo macaamiisha mustaqbalkoodu ay ka raadsanayaan adeegyo ama alaabo meel bannaan ah. Badanaa booqdayaashaadu waa dad hodan ah. Dad badan oo iibsadayaal ah ayaa raadinaya alaabadaada, laakiin ... raadso alaab la tartanta. Sabab? Waxay ka dhacayeen qorraxda hoosteeda liiska liisaska khadadka internetka maxaa yeelay waxay ku hormarinayaan agabkooda Internetka adiga oo adiga kaa horreeya. Midkood ma eryi karaa oo xitaa bedeli karaa xafiilta? Haa, haddii lagu aaminay dhiirrigelinta websaydhka xirfadleyda Semalt.
Aadista jagooyinka ugu sareeya
Qof kasta oo furay dukaan wuu ogyahay waxa ay tahay in laga ganacsado xaafad caan ah oo magaalada ku taal. Macmiilku wuxuu heli doonaa aragtida koowaad ee ganacsigaaga kahor booqashada. Waxay fiiriyaan cinwaanka dukaanka waxayna qiimeeyaan sharafkiisa heerka salka miyir-qabka. Shirkad, oo ku taal badhtamaha magaalada, oo ay ku badan yihiin dalxiisayaal iyo macaamiil hodan ah, ayaa uqurux badan barwaaqo. Macaamiisha hodanka ah way kugu soo ordi doonaan. Xeerkani ma khuseeyo oo keliya ururada ganacsiga. Xarumaha jimicsiga, jimicsiga, jimicsiga lafdhabarta ayaa sidoo kale u hogaansan sharciyada sharafta, sida suuqyada waaweyn ama dukaamada guryaha. Miyaad la yaabaysaa dadka adduunka ku nool ee adduunyada ku nool ee miyir qaba ama hoosta ka xariiqa fikradaha la midka ah ee sharafta? Haddii aad ku jirtid tobanka ugu sarreeya, kheyraadkaaga waxaa loo arkaa mid xushmad iyo qadarin leh.
Sida dukaanka qadka, goob wanaagsan oo ku taal meel madhan ayaa soo jiidata iibsadayaasha. Haddii aad ka soo muuqato natiijooyinka raadinta sare, 95% dadka wax iibsan kara ayaa fiiro gaar ah kuu yeelan doona. Sida tirakoobku muujinayo, kaliya labo boqolkiiba oo ka mid ah kuwa raadinaya ayaa xaqiijinaya inay galaan bogga afaraad ee raadinta. Si ka duwan dukaan qadka tooska ah, gaarista jagooyinka sharafta leh waxay u baahan doontaa maalgashiyo fara badan oo aan ahayn istaraatiijiyad horumarineed oo munaasib ah. Halkan waa inaadan ka helin sarkaal la rumeysan karo oo ka socda maamulka degmada, laakiin waa xirfadle khibrad leh. Adeegyadooda sidoo kale waa in la bixiyaa, laakiin khidmaddu aad ayey uga yar tahay qiimaha kireynta aag caan ah oo caasimadda ah. Laakiin xitaa dukaamo tafaariiqeed oo ku yaal bartamaha caasimada mala-awaalka ma soo jiidan doonto dad badan oo ka soo jeeda dalal kala duwan sida jagooyinka ugu sarreeya ee Google SERP.
Waa maxay macluumaadka macmiilku?
Si aad u bixiso qiimeyn guud oo ku saabsan dukaanka internetka oo aad u bogaadiso howlaha ay tahay in ugu horeyn la sameeyo, khabiirka SEO waa inuu falanqeeyaa alaabada iyo adeegyada. Wejigaan, istaraatiijiyad kor loogu qaadayo ganacsiga iyo qorshe shaqo oo dhameystiran ayaa la sameeyay. Aynu eegno mid ka mid ah ololayaasha Semalt ee guusha gaadhay - Insignis , oo ah dukaan qurxinta guriga oo ka yimid Romania. Waxay iibisaa badeecadaha loogu talagalay isticmaalka gudaha iyo dibedda (alaabta guriga, laambadaha, maacuunta jikada, kuwa shumaca haysta, iwm.). Shirkaddu waxay bixisaa adeeg tayo sare leh iyo gaarsiin degdeg ah badeecado kuyaal caasimadda iyo dhammaan magaalooyinka dalka.
Muuqaalka guud ee dukaannada 'www shop' oo loogu talagalay soo-noqnoqoshada sare, celceliska, iyo weydiimaha-hooseeya ayaa la falanqeeyay. Isla mar ahaantaana, khabiirka Semalt wuxuu bartay astaamaha kooxaha xafiiltannada iyo hogaamiyayaasha suuqa si ay u rumeeyaan faa iidadooda. Waxaa la qaabeeyey qaab dhismeedka websaydhyada hormuudka ka ah gudaha iyo muuqaalkooda iskuxiran, iyo sidoo kale weydiimo la aqoonsaday oo loogu talo galay in lagu wanaajiyo boggag deg deg ah. Wejiga hore, barnaamijka 'Semalt pro' ayaa lagu ogaanayaa inuu goobta ubaahanyahay horumar guud. Ugudambeyn, qofku wuxuu kugula talin karaa hagaajinta qaab-dhismeedka goobta - qaabeynta, badhanka, goobta iyo waxa ku jira buugga macluumaadka, abuurista bogag cusub.
Marxaladan ololaha SEO , waxaa mudan in laga fiirsado bal in wax laga beddelo CMS, lagu hagaajiyo barta aaladda aaladda, dib ugu qor http illaa https, iyo wixii la mid ah. Baahida loo qabo hormarin guud ayaa lagala hadlaa macmiilka kahor, inta lagu guda jiro miisaaniyad loogu tala galay kobcinta shabakada.
Raadi Query Core
Marxaladdan, SEO pro-uruursado, kooxo iyo go'aaminta inta jeer ee xudunta sheekada. Iyada oo la raacayo qaabka loo yaqaan 'www-store', xudunta Semantic-ka waxaa ka mid noqon kara dhowr boqol illaa boqolaal kun oo weydiimaha raadinta. Samaynta asaasku waxay qaadan kartaa dhowr bilood, markaa tan waxaa loo fuliyaa isbarbar dhig shaqooyin kale. Arrinta Insignis, waxaan go'aansanay inaan sare u qaadno ereyada-muhiimka ah ee muhiimka ah ee bogga guriga, qaybta wax soo saarka, iyo sidoo kale dhammaan dabo dheer oo leh darajo sare 100. Laba bilood ka dib bilowga dalacsiinta, waxaan ku darnay laba qaybood oo dheeri ah .
Qaab dhismeedka ballaadhan ee goobta
Goob kasta waxay u egtahay geed meesha jirku yahay bogga ugu weyn, qaybaha iyo cutubyadu waa laamo iyo caleemo. Inta ay qaab dhismeedu ahaan doono waxay kuxirantahay qaabka iyo nooca goobta. Bog hal bog ka kooban ayaa horeyba u leh jirrid geed oo jihooyin kala duwan ay uga soo bixi karaan. Insignis, sida dhammaan dukaamada internetka, waxay leeyihiin qaab aad u adag oo qaab-dhismeed badan leh. Koox kasta oo weydiimaha raadinta ah, waa inaad dejisaa oo aad u habeysaa bog baaris. Waxaa muhiim ah in la xasuusto in weydiimaha-ku-celceliska-hooseeya, ay ka wanaagsan tahay in la-muujiyo bogga bogga sheyga. Su'aalaha tiro-dhaafka ah, noocyada guryaha guryaha ayaa la dhisay.
Dhiirrigelinta degel deg deg cusub ayaa soo ifbaxa waqtiga la falanqeynayo muujinta raadinta tartamayaasha, iyo sidoo kale badeecadaha iyo adeegga. Dukaamada waaweyn ee websaydhada leh oo leh xarumo lagu qaybiyo magaalooyin kala duwan, sida Insignis, suuqyada iyo sumadaha xafiisyada ay ku xiran yihiin, tirada bogagga degitaanka waxaa lagu dhuftay tirada magaalooyinka. Waxyaabaha ay ka kooban tahay shabakadaha noocan oo kale ah waa inay noqdaan kuwo gaar ah. Mashaariicda waaweyn, shabakadaha cusub ee shaandheynta waxaa la sameeyaa xitaa muddo labo sano ah ilaa iyo bilowgii xayeysiinta goobta. Si loo helo saameyntii la rabay, waxqabadka ugu weyn ee ballaarinta qaab dhismeedka websaydhka waa in sida ugu dhakhsaha badan loo diyaariyo.
Yoolalka kobcinta gudaha
Khabiirka takhasuska leh wuxuu saxayaa khaladaad ku saabsan kobcinta websaydhka gudaha, isagoo la shaqeynaya shabakadaha degida ee kooxda wax weydiinta, wuxuu ka saarayaa nuqulada bogagga. Si tan loo sameeyo, xisaabtan farsamo SEO ah oo goobta ah ayaa lagu fuliyaa iyada oo lagu saleynayo hawl loogu talagalay kobcinta gudaha. Arrinta Insignis, mid ayaa saxay khaladaadka ka dibna wuxuu sii waday inuu xaliyo dhibaatooyinka muhiimka ah ee lagu aqoonsaday xisaabinta farsamada.
Mid waa inuu fuliyaa howlaha soo socda:
in lagu daro calaamadaha meta ee bogga guriga adiga oo adeegsanaya ereyada-fure mugga waaweyn oo ku habboon;
in la dhigo xawaaraha jawaabta serverka iyo boggaga boggaga;
si meesha looga saaro xiriiriyaha jajabay;
si loo xaliyo dhammaan 404 khaladaadka oo la hubiyo in dhammaan URL-yada ay sax yihiin;
si loo hirgaliyo xog habeysan oo nooca Ganacsiga Maxalliga ah iyo hagaajinta qaabaynta guryaha wax soo saarka;
si meesha looga saaro isku-darka URL-yada iyadoo la adeegsanayo dib-u-wareejin joogto ah, cinwaannada canonical, noindex raac;
si aad ula qabsato robots.txt si loo xiro calaamadaha lagama maarmaanka u ah oo looga hortago iskaanka bogagga kala soocida iyo raadinta bogagga shabakadda;
si loo abuuro khariidada goobta XML;
si loo qoro waxyaabo gaar ah oo SEO ah oo loogu talagalay bogagga waaweyn iyo kuwa gaarka ah iyadoo la adeegsanayo ereyo muhiim ah;
in lagu daro calaamadaha alt ee ka maqan sawirada iyada oo loo sii marayo jiilka hore.
Isku xirka gudaha
Waa muhiim ma aha oo kaliya in la sameeyo boggag deg deg ah laakiin sidoo kale in la sameeyo isku xirka gudaha si macaamiisha iyo baraha websaydhku ay si fudud u galaan bogagga kale. Haddii tan la sameeyo mooyee, waxaa laga yaabaa inaysan ku soo bixin tusaha jahawareerka webka. Khabiirka SEO ayaa dhista isku xidhka qaybaha menu iyada oo gacan ka heleysa qoraallada horumaray, halkaas oo ay ku darsadaan su'aalo horey loo soo aruuriyay iyo iskumar, waxay ku wareejinayaan culeyska halbeega ah boggaga tartanka hooseeya boggaga heerka sare ee buulshada.
Kordhinta WWW Bakhaarka Maaddada
Optimizer wuxuu gacantiisa ku abuurayaa calaamado gaar ah oo astaamo ah iyo cinwaano H1 ah oo ku saleysan "dabada dheer" ee codsiyada raadinta ee shabakadahaas halka ay lagama maarmaanka tahay. Sidoo kale, loogu talagalay boggaga xayeysiinta ee ku yaal barta www, qoraallada ayaa la sameeyay oo ay ku jiraan weydiimaha muhiimka ah ee hore loo soo ururiyey, sida iska cad, iyada oo la tixgelinayo codsiyada hadda ee shabakadaha internetka. Qoraallada ayaa saameyn ku leh darajaynta bogga labadaba weydiimaha-soo noqnoqda iyo muujinta weydiimaha dabada-dheer. Marka laga hadlayo Insignis, mid ayaa u suurtagashay inuu gaaro darajooyinka ugu sarreeya ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, iyo dhammaan dabo dhaadheer si ay u galaan 100ka ugu sareeya. Waxa intaa u dheer boggaga weyn iyo qaybaha mudnaanta leh, bogagga soo socda ayaa helay qaybta ugu badan ee taraafikada - nalalka / laambadaha / waxyaabaha qurxinta / shumacyada.
Kani waa tirada ugu badan ee bogagga macluumaadka ee raadinta Google raadinta robots ay ku gurguurta karto muddo cayiman. Waxaa lagu talinayaa in khabiiro khibrad leh oo keliya ay la shaqeeyaan miisaaniyadda gurguurta. Khabiirka ayaa si xirfadle ah u xiraya "bogagga qashinka" ee loo abuuray ku habboonaanta macmiilka oo keliya, wuxuu ka mamnuucayaa kuwa gurguurta inay soo booqdaan "bogagga qashinka" isla markaana xidhaan xiriiriyeyaasha iyaga.
Kobcinta Isticmaalka Websaydhka
Algorithms-ka loo yaqaan 'crawler crawler' ma tixgeliyaa arrimaha dabeecadda? Way sameeyaan. Taasi waa sababta SEO-pros uga shaqeyso howlahan sida:
ku-laabashada macmiilka shaashadda raadinta;
hoos u dhaca heerka boodhka;
kordhi waqtiga aad ku bixisay bogga bogga.
La qabsiga barta www ee aaladaha mobilada waxay si muuqata u kordhin doontaa aragtida goobta natiijada moobiilka. Waxay kaloo horseeddaa wada-beddello heer sare ah oo ka imanaya aaladda moobiilka. Hoosudhaca maraakiibta la sahlay ayaa hoos udhaca sicirka. Naqshadeynta saxda ah ee "Waxyaabaha nagu saabsan" bogga ayaa sii ballaarin doona kalsoonida booqdayaasha iyo jilayaasha webka.
Websaydhka dibedda ee kobcinta
Kheyraadkee ayaa waxtar leh? Tani waxay faa'iido u leedahay goobahaas ka hawl gala jawi aad u tartan badan. Meelaha qaarkood ee tartamada hooseeya, waad ku sameyn kartaa adigoon abuurin xiriirin kugu soo socota. Laakiin websaydhyada badankood, kobcinta dibedda ayaa ah lama huraan. Goobaha tayada badan ee mawduucyada tayada leh ee kuu horseedaa adiga, ayaa kalsoonidaadu noqoneysaa inaad "indhaha" ku soo jiidato kuwa gurguurta. Waxaa jira halbeegyo badan oo loo baahan yahay in lagu dhiso astaanta xiriirka oo ay doortaan tabaruceyaasha.
Kordhinta soo-booqdayaasha macaamiisha
Marxaladan kor u qaadida websaydhadu waxay u baahan tahay aqoonta naqshadeynta, adeegsiga, suuqgeynta emaylka, iyo xitaa xirfadaha abuurista waxyaabo tayo sare leh. Khabiirka SEO halkan wuxuu ku qaadaa talaabooyinka soo socda:
waxay saxdaa foomamka amarrada;
ku darey algorithms-ka isgaadhsiinta maamulaha-maamulaha;
beddela midabada waxyaabaha websaydhka;
shaqeeya on maragyada;
Waxay dejisaa kicinta wargeysyada shaqsiyeed.
Tanina waa uun boqol meelood oo horumar ah oo kordhisa beddelka goobta. Haddii ay timaado guusha Insignis, mid ka mid ah ereyada-furaha ugu muhiimsan ee shirkaddani waxay qaadatay kaalinta koowaad ee darajada TOP-10. Erey-fure kale (oo loogu talagalay qaybta mudnaanta leh) ayaa durbadiiba gaadhay TOP-3. Guusha ganacsiga internetka ma aha fikrad guud. Waxaa lagu sheegi karaa xaqiiqooyinka. Guusha ololaha SEO ee shirkadan Romania muddo 6 bilood ah waxaa lagu muujiyey tirooyinka soo socda: 232 ereyo-fure ayaa ku jira TOP-1, iyo 1136-ereyo muhiim ah ayaa ku jira TOP-TEN (marka la barbar dhigo tilmaamayaasha kahor ololaha. - 4 iyo 55, siday u kala horreeyaan). Intii lagu jiray bishii koowaad, tirada dadka raadinaya alaabooyinkan iyada oo loo marayo raadinta dabiiciga ah ayaa kor u kacday in ka badan 1000. Mid ayaa arki kara dakhli kordhay iyo aqoonsi astaan wanaagsan. Ma waxaad dooneysaa in dhammaan bogagga ku yaal bartaada si dhaqso leh loo shaandheeyo? Semalt wuxuu dooran doonaa istiraatiijiyad kor u qaadista SEO ee adiga kuugu fiican.